Kulankii cimilada QM oo Baariis loo fadhiyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kulanka cimilada ee Baariis. Sawirle: TT/ Sveriges Radio
Magaalada Baariis oo indhaha lagu hayo
La daabacay måndag 30 november 2015 kl 10.29
Magaalada Baariis ee caasimadda dalka Faransiiska ayuu maanta ka furmayaa kulankii caalamiga hayadda Qarammada Midoobey (QM) ee looga xaajoonayey sidii cimilada loo dhowri lahaa, halkaasina oo ey qayb ka noqon doonaan hoggaamiyeyaal gaarsii-san 150 oo ka kala socda waddammada caalamka.
Hayadda QM oo goolkeedu yahay in aanu heer-kulka cimiladu kor u kicin wax ka badan 2 digrii, iyadoona lagu jiro xaalad degdeg ah, halka ay iminkaba wasakhda hawada lagu sii daayaa gaarsii-san tahay 1,5 digrii. Iyadoona ey waddammo badani aamin-san yihiin in goolkaa laftiisu yahay mid halis keeni kara. Dalka Indooneesiya ayuu ka socdaa Teguh Suryah, xubinna ka ah ururka Greenpeace. Dalka Indoneeesiya ayay bilihii ugu dambeeyey caqabad uu ku hayay dabab ka kacey duurarka. Halka iminka la gaarey xilligii roobabka, lagana cabsi qabo daadad.
– Dab, webiyo iyo roob mar kale. Sidaa daraadeed ayay dalkaasi muhiimad ugu fadhidaa in la gaarsiiyo taageero dhaqaale, waayo bisha feeberaayo ayaa la fileyaa inuu dab haddana kaco, sida uu sheegay. Teguh Suryah ayaa rajeeynaya in waddammo uu Swden ka mid yahay ey horseed hoowlahaa ka noqdaan.
– Waxaan madaxda Sweden ka fileynaa iney cadaadis ku saaraan waddammada xubnaha ka ah EU sidii ey uga muuqan lahaayeen kulanka cimilada ee ka furmay magaalada Baaariis, sida uu hadalka u dhigay.
Kolka laga yimaado 10 000 ee matalaya waddammada ayey sidoo kale kulanka goob joog ka yihiin tiro intaa le’eg ee ka socota shirkadaha, cilmi-baareyaal iyo ururro.
Intaa waxaa dheer iney kulammo dheeri ah oo ka bax-san kulanka qabanqaabiyaan ugu yaraan 20 000 oo ruux. Halka ey ku sugan yihiin goobta uu kulanku ka dhacayo tiro suxufiyiin ah oo gaarsiisan 3 000, iyadoo tiro kale oo intaa le’eg oo soo codsadey iney kulanka yimaadaan lagu war-geliyey in aannu boos jirin. Iyada oo weliba goobta uu kulanku ka dhacayo ee madaarka Le Bourget oo dhaca dibadda magaalada Baariis ay le’eg tahay 350 jeer garoommo kubbad cageed.